ထိုင်းမှာ မြန်မာတွေကို ဒုက္ခလှလှပေးပြီး ဖမ်းကုန်ပြီ
มุมมอง 296 549
96%6834 265
ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ်သားဒုက္ခသည်တွေ ခိုလှုံနေတဲ့ AAC ​ဂေဟာကို ထိုင်းပုလိပ်​များ၊ ထိုင်းစစ်​သားများ၊ ထိုင်းလဝကနဲ့ မြန်​မာပွဲစားလက်​​ဝေခံများ၊ ထိုင်းပွဲစားလက်​​ဝေခံများ စတဲ့ အဖွဲ့တွေပူး​ပေါင်းပြီး အတင်းအဓမ္မ ​စီးနင်းဝင်ရောက် ဖျက်​ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဥပ​ဒေမဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မီးဖျက်​​​ရေဖျက်​၊ စားနပ်​ရိက္ခာဖျက်​ခိုင်းကာ ဂေဟာမှာ ခိုလှုံနေတဲ့ မြန်မာတွေကို ညတွင်းချင်းထွက်သွားဆိုပြီး ပြန်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့ ထိုင်ရောက် မြန်မာတစ်ဦး ကိုကြံတိုင်းအောင်က သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
Video Crd: Kyan Tine Aung
အကုန်သိAKonThiAkon ThiAkonthi Media
mr.nayhtunaung@gmail.com Nay 11 วันที่ผ่านมา
Shahid Myammar 19 วันที่ผ่านมา
​သေ. လိုက်​မြန်​မာ​တွေ ​စောက်​ကျင့်​မှ မ​ကောင်းတာ
พงศกฤษ์ สุขสุวรรณ หลายเดือนก่อน
နိုင်ထွေး ရငဲသား Twe หลายเดือนก่อน
Tm Tm หลายเดือนก่อน
Saint Desilver หลายเดือนก่อน
Ma Nawe หลายเดือนก่อน
Uu Hh หลายเดือนก่อน
မြန်မာ လုမျိုအချင်ချင် မလုပ်သင့်ပါ
ko kyaw หลายเดือนก่อน
za za2หลายเดือนก่อน
ဒါပေမက် ကတိတစ်ပေးရမေ ဘာလဲဆိုတော့ တောင်းဆိုတာက လူမျိုးမခွဲရဘူး
ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲသူတွေ ထိုင်းစကား တစ်လုံးတပ်ပီဆို ဘ၀ပျက်နေကြပီနော် ဒါပေမက် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ထိုင်းစဘယ်နှစ်မျိုးရပြောပေးလိုက်မေ
ရပါတေ ကြိုက်တဲအချိန်ပြော ကူညီပေမေ ထိုင်စားလေးရေပေးမေ စကားမကပ်ပါဘူး
Df Hh3หลายเดือนก่อน
ပြည်​သူ​ပေးတဲ့လစားစားပီး​တော့ ပြည်​သူကိုမှကူညီမှုဆိုတဲ့အကာကွယ်​​မ​ပေးနိုင်​တဲ့အပြင်​ လပ်​​ပေးလပ်​ယူမှု​တွေနဲ့လက်​လိုရှု​နေရင်​​တော့ ဘန်​​ကောက်​မှတာဝန်​ခံ သံရုံးအားဖြုတ်​ချပျက်​လိုက်​ပါ ကိုယ့်​နိုင်​ငံသား​တွေပဲ နက်​နာပါတယ်​
cho cho3หลายเดือนก่อน
Saw Kayin3หลายเดือนก่อน
Naing Naing3หลายเดือนก่อน
မှန်တယ်တကယ်အားကိုးရတာကAAC ပဲ ကျန်တာဘယ်တကောင်မှအားကိုးမရပူး ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ဒုတိယမြောက်အဖေအမေလိုအားကိုးလို့ရတာAAC ပဲ ကျန်အဖွဲ့စည်းတွေကအားကိုးမရပူး
ThinThinSwat รัตน3หลายเดือนก่อน
Ty Uhh4หลายเดือนก่อน
ဘာလည်း ချင်​​တောင်​လား ဟိတ်​​ကောင်​​တွေ မင်​တီု့​တွေ လူလူ​ဝေးလုပ်​​နေတာငါသိတယ်​ ဘားမှလာမ​ဖော်​နဲ့ ​တောက်​ရူး အနိင်​ကျင်​တာမဟုပ်​ဘူးထိုင်​က မင်းတို့လုပ်​ဇက်​​တွေ မင်းတို့မဟုပ်​တာလုပ်​လို့​ပေါ
ye naung6หลายเดือนก่อน
ထိုင်းမှာမှမဟူတ်​ မ​လေးရှားလဲ ဒီမ​အေလိုး​တွေ တူတူပဲ လစာများများစားပြီး ​ခွေး​လောက်​အသိမရှိတာ​တွေ သံရုံးသွားစာအုပ်​​လျောက်​​တောင်​ ပိုက်​ဆံအလကား သ​တောင်းစားလို​တောင်းတာ သံရုံးက​ကောင်​မ​တွေ ​ကောင်​​တွေတူတူပဲ အပြင်​မှာ​တွေ့ရင်​သတ်​မှာ မ​တွေ့လို့ ​တွေ့ရင်​သတ်​မှာ မ​လေး ထိုင်းအတူတူပဲ သံရုံးက​ဖေလိုးမ​တွေ သတိထားကျ
လုပ်​ကွကြိုက်​တယ်​ လူကုန်​ကူး​နေတဲ့​ကောင်​​တွေ ဖမ်းကွ တချို့​အောက်​လမ်းအ​နေနဲ့ သွားတာ မိန်းမသား​တွေကိုဖျက်​ဆီးတာ​တွေရှိတယ်​ ဒီ​ကောင်​​တွေကို ​ကော့​သောင်​ မြဝတီကဆိုင်းဖမ်းသွားပါလို့ ​ယောက်​ကျား​တွေကျတစ်​မျိူးဆက်​ဆံပြိး မိန်းမသား​တွေကျ​တော့ ​အောက်​လမ်းကလာတာ ထိုင်းရဲ​တွေကို ​ပေးချခိုင်းတယ်​သူတိူ့လဲလုပ်​တယ်​ ဖမ်းကွ ​တွေးရင်​ ရင်​နာတယ်​ဒီ​ကောင်​​တွေကိုရှင်းပါဗျ အား​ပေးတယ်​ အကူညီလိုရင်​ကူညီမယ်​
မိုးသက်နိုင်Vjf Fnjf7หลายเดือนก่อน
JACK JACK7หลายเดือนก่อน
ငါးလိုးမသံမူးလိုဘဲဆဲချင်တယ် မကြေနပ်ရင်မင်းအမေကိုဖင်ခံခိုင်းလိုက် ထိုင်းကောင်တွေလိုးပေးလိမ့်မယ်
Gg Gg7หลายเดือนก่อน
Gg Gh7หลายเดือนก่อน
ဟုတ်​တယ်​ကို​ရေ ​ခွေးထိုင်း​တွေက အရမ်းနိုမ်းကြတယ်​
May Lay7หลายเดือนก่อน
Aung Aung7หลายเดือนก่อน
Minmin Minmin7หลายเดือนก่อน
ပွဲးစာဆိုရင် ဘယ်လိုပွဲစာကိုမကြိုက်ပါဘူ ပွဲးစာလုပ်တာထက် သူခိုးလုပ်တါ မှပိုပြီမြင့်မြတ်အုန်းမှာပါ ပွဲစာဆို ရင်အကုန်လုံးကိုရွန်တယ် ဒါဘဲ့
သံအမတ်ကြီထက်ကြီတဲ့ မြန်မာမှာရှိတဲ့မြန်မာလူကြီတွေ လည်းရှိတယ် လက်ရှိခံထာရတယ်
တွေ့ကြပြီလာမညီညွတ်တဲ့တို့မြန် မာတွေ့ကြပြီလာ ကိုယ့်အချင်ချင်း မညီညွတ်မနာလိုဘဲရဲတွေကိုမြောက်ပေပြီဖမ်ခိုင်တယ်ဆိုတာသိပါ
Aung dj7หลายเดือนก่อน
Hufk Vhvu7หลายเดือนก่อน
Mg ChanAye7หลายเดือนก่อน
ဥပ​ဒေလမ်း​ကြောင်းသိတက်​တာဝန်​​ကျေခြင်​ရင်​ မြန်​မာပြည့်​မှာ ​ဆောင်​ရွက်​ပါ သူများနိုင်​ငံမှာ​နေမိတာသူများနှိပ်​ဆက်​တာမဆန်းပါဘူး
The Pro7หลายเดือนก่อน
Myanmar music new Dawei Dj SR7หลายเดือนก่อน
ဟုတ်​တယ်​ အကို​ပြောတာအမှန်​တယ်​ ထိုင်း မြန်​မာ​တွေ ခနခနဖြစ်​​နေရတယ်​
Geeta Davt7หลายเดือนก่อน
Nay Toe Toe Nay7หลายเดือนก่อน
Mon Gyi7หลายเดือนก่อน
မပြောနဲတော့မြန်​မာသံရှံး ပိုင်​ဆံမပေရင်​ မြန်​မာင်္သင်္ရှမကူညီပေ ဆန်​မောင်​ပြောတယ်​လေ
Cho San Cho7หลายเดือนก่อน
Reena khadka 8 หลายเดือนก่อน
Ko Oo 8 หลายเดือนก่อน
WinWin Win 8 หลายเดือนก่อน
ထိုင်မှာ အလာကားနေတာမဟုတ်ပါဘူး အခွန်ဆောင်နေတာ
Bee Jal 8 หลายเดือนก่อน
အ​ရေးဆို မြန်​မာသံရုံးကို အပြစ်​မြင်​လို့မရပါဘူး သူတို့ဝင်​ဖမ်းတာ သံရုံးက သိချင်​မှသိမယ်​ သူတို့ထိုင်း​တွေ မြန်​မာလူမျိုးဆိုရင်​ သိပ်​ဂရုစိုက်​တာဆို​တော့ သံရုံးလဲ ဖမ်းပြီးမှသိရင်​ ဘာမှမတတ်​နိုင်​ဘူး သူတို့လဲ ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်​လို့ ဒီလိုဝင်​ဖမ်းရဲတာ​ပေါ့ ရဲနဲ့ စစ်​တပ်​နဲ့ ဝင်​ဖမ်းရ​အောင်​ AACမှာ မူးယစ်​​ဆေး ​မှောင်​ခိုလုပ်​​နေတာ မဟုတ်​ဘူး အင်​အားသုံးပြီးဖမ်းတာကို​တော့ ချီးကျူးတယ်​
သူတို့နိုင်​ငံမှာက​လေး၁၃​ယောက်​​ပျောက်​​တော့ တို့မြန်​မာ​တွေ တနိုင်​ငံလုံးက ဝမ်းနည်းပူ​ဆွေးပြီး ဝိုင်းဝန်​ဆု​တောင်း​ပေးကြတယ်​ အိမ်​နီးချင်းနိုင်​ငံဆိုပြီး အချင်းချင်း​လေးစားတယ်​ ဝိုင်းဝန်းကူညီ​ပေးကြတယ်​ ဒါ​ပေမဲ့ ငါတို့မြန်​မာလူမျိုးဆိုရင်​ လူလို့မထင်​တဲ့ သူတို့နိုင်​ငံသား​တွေ ​ဘေးအန္တရာယ်​ကင်းပါ​စေ ငါတို့မြန်​မာနိုင်​ငံသား​တွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ နှိပ်​စက်​အနိုင့်​ကျင့်​တာ ခင်​ဗျားတို့ရဲ့ ဓ​လေ့ထုံးစံပဲ ဘာမှမဟုတ်​ဘူး AAC​ဂေဟာမှာ မြန်​မာအလုပ်​သမား​တွေ​နေစရာမရှိလို့ ခိုလှုံ​နေတာကို လူစုလူ​ဝေးဖြစ်​မှာစိုးလို့ ​ကြောက်​လန့်​ပြီး အလုပ်​သမား​တွေကို​မောင်းထုပ်တာ အမှန်​ဆိုရင်​ ဖယ်​ခိုင်းရင်​လဲ အသိ​ပေးသင့်​ပါတယ်​ ရုတ်​တရက်​ ဒီလိုဝင်​ဖမ်းတာဟာ လူ့အခွင့်​အ​ရေးကို ချိုး​ဖောက်​ပြီး အာဏာရှင်​ဆန်​ဆန်​ ပါဝါပြတဲ့ပုံလိုလို မလုပ်​သင့်​ပါဘူး ဒီလို​တွေသာ လုပ်​မယ်​ဆို အိမ်​နီးချင်​ ချစ်​ကြည်​​ရေး နိုင်​ငံဆိုတာ ဘာကို​ပြောတာလဲလို့ ​မေးစရာ​တွေဖြစ်​လာမယ်​
Jeen Kaung 8 หลายเดือนก่อน
AAc အဖွဲ့သားများကသာ အလုပ်​သမား​တွေကို ကူညီကြတယ်​ သံရုံးကကူညီတာမရှိဘူး ဘာလုပ်​​နေကြသလဲ​တော့မသိဘူး
Moe Moe 8 หลายเดือนก่อน
မအေးလို့ လီးလီးလီး ပွဲစား စပ ပွဲစား
မအေးလို့ ထိုင်း လီး ထိုင်း
စပ ထိုင်း ပစ ထိုင်း
လီးလီးလီး မြန်မာသံရုံး လီးလီးလီး ထိုင်း ထိုင်း
လီးလီးလီး မြန်မာသံရုံး လီးလီးလီး ထိုင်း
ml family 8 หลายเดือนก่อน
min min 8 หลายเดือนก่อน
HTET AUNG 8 หลายเดือนก่อน
Ma Ma Ma Ma 8 หลายเดือนก่อน
AAcအဖွဲ့က မကောင်းတာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး ထိုင်းမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့စီးထဲ့က အကောင်းဆုံးအဖွဲ့ပါ ထိုင်းမှာမြန်မာလုပ်သားသိန်းနဲ့ချီရှိပါတယ်ဘယ်သူ ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာအားလုံးအသိပါ AAcအဖွဲ့တွက် နိုင်ငံတော်ကအရာရှိများလက်ပိုက်ကြည့်မနေပါနဲ့ 😭😭😭😭😭
Ni Ni 8 หลายเดือนก่อน
Dg Dg 8 หลายเดือนก่อน
tay Zar 8 หลายเดือนก่อน
ချစ် မိုး 8 หลายเดือนก่อน
soe chit 8 หลายเดือนก่อน
သုံးစားလို့အရတဲ့ သံရုံးကိုထားမနေတော့နဲ့ အလားကား ပြည်သူလူတုစီက ပိုက်ဆံယူပြီး လူပဝနေတာ
Thu Ra 8 หลายเดือนก่อน
သံရုံးကို သွားဖြိုမလား လိုက်မယ်
ဆက်သာလုပ် အမြဲအားပေးနေတယ် အကိုကြီး
Ye Lay 8 หลายเดือนก่อน
ငါတို့မြန်မာတွေကို အခုလိုနိုပ်ဆက်တာကတော့ လူမဆံဘူးကွာ ဝိုင်းဝန်ကူညီပေးကြပါ မကျေနပ်ဘူကွာ
Kwee lay phyu 8 หลายเดือนก่อน
မြန်မာနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုများ အထူးဂရုစိုက်ပေးပါ
Mr Zarni 8 หลายเดือนก่อน
sai sai 8 หลายเดือนก่อน
မူဆယ် လဝက အလုပ်ဝန်ထမ်တွေ လစာတစ်လ15သိမ်းရတယ် တစ်ချို့ဆိုသိမ်း20တောင်ရတယ်
မြန်မာပြည် လဝက ဆိုတာပိုက်ဆံရရင်အကုန်လုပ်နိုင်တယ် ပိုက်ဆံမပေးနိုင်ငံ လဝက ကိုဖင်ခံပေးလိုက်မှ ကူညီမှာ တရုတ်ပြည် သွားဖို့တောင် ငွေပေးရင်မှတာ အကုန်လုပ်ပေးတယ် လိမ်စာတယ် အစိုးရကိုဘာမှ သွားမအပ်ဘူး ဝင်ငွေတွေအများကြီးရတယ်
Khongsak Maneejinda 8 หลายเดือนก่อน
ကျတော်တို့..ဖခင်ကြီး အောင်ဆန်းသွေးက AAC အဖွဲ.ထဲမှာဘဲ ရိုတယ် မြန်မာသန်ရုံး ထွီး..ဆောက်သုံးမကြဘူး
ထိုင်မှာ လိုရင်ဘဲပြောမယ် AAC. ရိုနေလို့ AAC. တာမရိုရင် ကျတော်တို့ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ မတွေးရဲဘူး... ဗျာ ..မြန်မာသံရုံးက.. ဘာမှအားကိုးမရဘူး ဆောက်ဆုံးမကြဘူး ဖုန်းထိုးလဲမကိုင်ဘူး ဖုန်းကိုလဲ...ကျတော်တို့ ဒုတ်ခရောက်နေပါတယ်လို့ ပြောလဲ..မသိခြင်အောင် ဆောင်တယ်..ဘယ်အရာမှ ဦးဆောင် ပြီးလိုက်ကူညီပေး တာ..မရိုလိုပါဘူး80%%% ဒါတွေအားလုံးက ထိုင်းရောက် မြန်မာ့ အလုပ် သမားတွေ သိပါတယ် 100%%%သိကြတယ် အာကိုးရတာဆို AACဘဲရိုတယ် 100%%
Moon rose3หลายเดือนก่อน
Khongsak Maneejinda I
Paypay Paypay 8 หลายเดือนก่อน
့မြန်မာသံရုံးသည် လပ်စားသောofficeဖြစ်သည် တရားဝင်ရှုံ့ချပါသည်
Win Win 8 หลายเดือนก่อน
မြန်မာ သွေကို အဲလောက်ကြည်နိုင်မကြင့်သင့်ပါဘူ မြန်မာထိုင်းသံလွမယုံရယ်
lu soe 8 หลายเดือนก่อน
မြန်မာသံရုံးတွေ့ လီးလုပ်ဖို့းထားတာလာ ဒါ့မျိူးမှာ မကူညီးရင်
La Min Nge 8 หลายเดือนก่อน
ထိုင်းနိုင်ငံ မှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံး လား ကိုယ့်မြန်မာ ဒုက္ခရောက်လေး ကျေနပ်လေ နင်တို့ဒုက္ခရောက်တာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက ငါဒုက္ခမရောက်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး လွှတ်ထားတာ မမြင်သလိုပဲပစ်ထားတာ😢😢ဘာဒုက္ခပဲရောက်ရောက် မြန်မာသံရုံး ကိုတော့ အားမကိုးဘူး
CYNN CYNN 8 หลายเดือนก่อน
​အောင်​ဆန်းစိုးကညြ်​ လည်း ဘာ မှ မတတ်​ နိုင်​ ဘူး
Nvhv Xbc 8 หลายเดือนก่อน
Ye Aung 8 หลายเดือนก่อน
AAC အဖွဲ့ခံရတာကောင်းတယ်ကွာ ဒာပေးမယ်မြန်မာတွေကိုတော့စိတ်မကောင်းဘူး Fb Chit Thu အကောက်ထဲဝင်ကြည့်လိုက်ပါမင်းတို့အဖေခေါ်နေတဲ့AACအဖွဲ့ဒို့တိုင်းရင်သားတွေအပေါ်ဘယ်လိုရုပ်မာထားလဲဆိုတာကြည့်လိုက်
ဟာ မင်းတို့အဖေခေါ်နေတဲ့ အဲ့ AAC အဖွဲ့ကယော ဥဗဒေနဲ့ညီအောင်လုပ်လို့လာ လီးပဲနော်
สวัส คี 8 หลายเดือนก่อน
မြန်မာနိုက်ငံကစေလွှတ်ထားတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာသံရုံးကကောင်တွေ ခင်များတို့ကို စေလွှတ်ထားတာက ကိုယ့်နိုင်ငံက မြန်မာတိုင်းရင်းသားရွှေ့ ပြောင်းအလပ်ြသမားတွေကို စောင့်ရှောက်ဖို့ဗျ အဲလ်ကွန်းခန်းထဲမှာထိုင်ပြီး ဇိမ်နဲ့ နှပ်နေဖို့ မဟုတ်ဖူး မြန်မာလုပ်သမားတွေ ကို ခင်များတို့ကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ ခင်များတို့ မလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကို AACကလုပ်နေတာ ဒါကို ခင်များတို့ မဝန်းရံတဲ့အပြင် ပုတ်ခတ်နေတယ် . ပုတ်ခတ်မှာပေါ့ခင်များတို့စားပေါက်ပိတ်သွားမှာကိုဟုတ်တယ်မလား AAC မဟာမိတ် ခိုင်မြဲတည်တံ့ ပါစေ။
ko ko 8 หลายเดือนก่อน
kayan james 8 หลายเดือนก่อน
အဲဒါတွေက မြန်မာ့သံရုံကြည့်ပေးတင့်ပါတယ် မြန်မာ့သံရုံးက အရမ်းအားငယ်တယ် သံရုံးက ပြည်သူပေးငွေလစာပေမဲ့ ပြည်သူကိုမကြည့်ဘူးမကူညီဘူး ပြောရမယ်ဆိုအများကြီးဒီတိုင်းနေဒါလား ပေးထားတဲ့တာဝန်ကမကြေဘူး ခုသံရုံအမတ်ကြီးအလိုမရို
OoHninThuwai Oo 8 หลายเดือนก่อน
kophyo py 8 หลายเดือนก่อน
Petru Ngen 8 หลายเดือนก่อน
လုပ်သင့်တာကြာလှပါပြီ လေးလေးရယ် မြန်မာအချင်းချင်း ရဲလှည့်ကွက်တွေပါ။လေးလေးရယ်....
zawwinkhaing zawwinkhaing 8 หลายเดือนก่อน
၂၄ နာရီအတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့သောထူးခြားမှုခင်းများ (၄၇၀)
RFA မနက်ခင်းသတင်းများ (၂ဝ၁၉ ဇွန်လ ၁၈ ရက်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဦးအောင်ဆန်းဦးတို့ရဲ့ အမွမှု - ဘီဘီစီနဲ့ မေးမြန်းခန်း (အပိုင်း ၁)
အညာဒေသက ထန်းတောတွေ ပျောက်ကွယ်သွားတော့မလား
လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းမှာ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း ခိုင်းစေခံခဲ့ရသူ
ဓါးမြ တော့ခံလိုက်ရပြီ/Official /funny/Myanmar/2019
အမေရိကန် ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ဟွာဝေးထုတ်ကုန်တွေ လျှော့ထုတ်မယ် - ဘီဘီစီ မြန်မာ တီဗီ
တချိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ကို ဘယ်လိုကျင်းပခဲ့ကြ - ဘီဘီစီ မြန်မာတီဗီ
Sayadaw U Thumingla on Religious Tensions
"သင်္ကန်းချွတ်ပြီး ထောင်ထဲထည့်မလို့လား" လို့ ဦးဝီရသူ မေးခွန်းထုတ်
มุมมอง2232 719
มุมมอง 916 512
มุมมอง6705 722
มุมมอง5447 345
มุมมอง 1 431 656
มุมมอง 749 369